နှစ် ၉ ၀ ပြည့် တက္ကသိုလ် နန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တစ် နှစ်တာ ထူးချွန်မှု အရှိဆုံးသူ – မဝေနှင်းပွင့်သုန်
On sick leave, deadwood and low wages »
တို့များ ….တွေ့ကြလို့ မေ့မရတာရှည်…. တက္ကသိုလ်သည်ကွန်း…..မြွက်ဆိုရည်ညွန်း ဥဒါန်းတွင် ကမ္ဘာတည်…)၂
ထပ်ကာ ဖွင့် ရင်း.. ကြည်နူး လွမ်းဆွတ် နေ မိ သည်။
ပြီးတဲ့..တန်ဆောင်မုန်း လဆုပ် ၁၀ ရက် နေ့ က.. အမျိုးသား အောင်ပွဲ နေ့ ကြီး နဲ့ အတူ.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကြီး လည်း..နှစ် ၉ ၀ တင်းတင်း ပြည့် ခဲ့ ပြီ မို့… တခုခု ရေးချင် နေ ခဲ့ သည်။ ဒါပေမဲ့..မရေးဖြစ် ခဲ့။ အဲဒီ လောက် ခမ်းနား ကြီးကျယ် တဲ့..သမိုင်း အဆောက်အဦ ကြီး ကို.. မမှီ မကမ်း လက် ကလေး နဲ့ ..ချီးပ ဖို့ရာ.. မရဲတင်း ခဲ့ ပေ။ သို့ပေ သော် လည်း.. မြန်မာ ပြည် တနံ တလျား များပြား လှ တဲ့..သူ့ သားသမီး ..မျိုးဆက် တွေ တိုင်း ရဲ့ ရင်ထဲ မှာ တော့ …. နည်းသည် များ သည်.. နီးသည် ဝေး သည်… စိမ်း သည် ကျက်သည် .. မဟူ..အတိတ်တွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ .. နဲ့.. ဆက်သွယ် ပို်င်ဆိုင် နေ မိ ကြ သည် သာ။
ဒီ သီချင်း လေး ကို.. ငယ်ငယ် ကတည်း က .. ရေဒီယို မှာ ကြားရ တိုင်း.. တနေ့ နေ့.. ဆယ်တန်းအောင် လို့.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကြီး ကို တက် ရင်… ဆိုတဲ့… အာရုံ စိတ်စော တွေ နဲ့.. အတွေး နန်းတော် တိုင်းပြည် ကြီး ထဲ မှာ.. ပျော်ရွှင် မျှော်လင့် ခဲ့ ရ သည် ပေါ့။ သီချင်း သံစဉ် က.. မမြူး ကြွ လှ ပေမဲ့.. စာသား တွေက.. နန်းတော် တဆောင် လို… ခန့်ထည် သေသပ် လှ သည်။ အခု..ဒီ သီချင်း လေးကို.. မဇ္ဖိမ မှာ.. ..ပုံလေး တွေ နှင့် အသေအချာ လုပ်ထား တာလေး ကို.. သူငယ်ချင်း တယောက် ရဲ့.. face book စာမျက် နှာမှာ တွေ့ တော့.. ထပ်ကာ မမြင်ဖူး ခင် ကတည်းက.. ရောက်နေ ခဲ့ ရ တဲ့.. ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကြီး ကတော့… ညနေခင်း မိသားစု ရေနွေး ကြမ်း ၀ိုင်း ထဲ က.. .ဖခင် ဖြစ် သူ ရဲ့.. အတွေ့ အကြုံ လှုပ်ရှားမူ တွေ အဖြစ် .. ၊ ရုပ်ရှင် တွေ..၀တ္တု တွေ ထဲက.. ရင်ခုန် ကြည်နူးဖွယ် တက္ကသိုလ် ပုံရိပ် တွေ ဇတ်လမ်း တွေ. အဖြစ်.. ၊ ရေဒီယုို သီချင်း..ခေတ်ပေါ် သီချင်း တွေ ထဲ မှာ စီးမျော လာတဲ့.. အနုရသ သံစဉ် စာသား တွေ အဖြစ်.. သူတို့ အားလုံး အပေါ် လွှမ်းမိုး နေခဲ့ သည်။
နောက်တော့ လည်း…… ~~~~ တက္ကသီလာ မြကျွန်းသာဆီ.. အခြေခံ ပညာ အောင်မြင် ခဲ့ ကြ သည်. ~~~~ ဆို တဲ့.. ရေဒီယို သီချင်း လေး နဲ့ အတူ.. ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ… ဖြတ်သန်း ကြုံဆုံ ရင်ခုန် ခဲ့ ရ တော့ သည်။
thinking about learning (ask.metafilter.com)
In-service training brings bread to university lecturers (lookatvietnam.com)
In-service training courses mushrooming despite criticism on quality (lookatvietnam.com)
Tags: Burma, Education, High school, Lecturer, Student, Training
This entry was posted on December 30, 2010 at 9:03 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.